Qarax ka dhacay Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa miinada dhulka lagu aasay, islamarkaana lala eegtay gaari Cabdi Bile ah oo ay saarnaayeen ciidamado ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa asluubta oo goobta marayay.
Wali lama oga khasaaraha ka dhashay Qaraxa waxaana la sheegayaa in 2 qof mid askari yahay uu ku dhintay Qaraxa waxaa markiiba goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya khadar kooban hakad galiyay isku socodka dadka iyo gaadiidka waddada uu qaraxu ka dhacay.
« Boliiska Soomaaliya oo war ka soo saaray Qarax caawa ka dhacay Muqdisho.
Haweeney ku dhimatay weerar taageerayaasha Donald Trump ku qadeen xarunta Capitol Hill »